Izinqolobane ze-GMO - Ilungelo Lase-US Lokwazi
IGates Foundation isebenzise ngaphezulu kwe- $ 4 billion kusukela ngo-2006 ukuze "sisize ekuqhubeni uguquko kwezolimo”E-Afrika. Ubuningi be- imali iya ku ucwaningo lobuchwepheshe kanye nemizamo yokuguqula abalimi base-Afrika basebenzise izindlela zezimboni zezolimo futhi bandise ukufinyelela kwabo ezimbewini zentengiso, umanyolo nokunye okokufaka. Abaxhasi bathi le mizamo nika abalimi izinqumo abazidingayo ukukhulisa ukukhiqizwa futhi bazikhuphule ebuphofini. Abagxeki bathi "inguquko eluhlaza" amasu alimaza i-Afrika ngokwenza izimiso zemvelo zintekenteke kakhudlwana, ukufaka abalimi ezikweletini, Futhi ukuphambukisela izinsiza zomphakathi kude kusukela izinguquko ezijulile zesistimu kwakudingeka ukubhekana nesimo sezulu kanye nezinkinga zendlala.
Ucwaningo Olusha: Ukwehluleka Ukumelana Nezinambuzane ze-GMO; Isilimo Sommbila Esengozini
Posted on January 9, 2017 by UStacy Malkan
Ucwaningo olusha lunezela ebufakazini bokuthi ukusebenza kwezici ezithandwayo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ezisetshenziselwa ukuvikela ummbila nokotini ezinambuzaneni kuyahluleka, kubeka engcupheni ukukhiqizwa kommbila wase-US, futhi kubangele isidingo sokwanda kokusetshenziswa kwezinambuzane.
Isifundo, ebhalwe ngabathathu babacwaningi abazimele, imibhalo emelana nesilokazane esikhulu sezitshalo ezibizwa ngokuthi yi-corn earworm, futhi ingeza ezixwayisweni zokuthi ubuchwepheshe obudumile be-GMO obumelana nezinambuzane obaziwa ngokuthi yi-Bt, ngemuva kwebhaktheriya elihlala emhlabathini iBacillus thuringiensis, alusakhazimuli. Kuyaphawuleka njengokuhlolwa kokuqala kwesikhathi eside, kwensimu kokusebenza kommbila we-transgen Bt ngokuqhathaniswa nesinye sezinambuzane ezilimaza kakhulu ummbila omnandi, ummbila wasensimini, ukotini nezinye izitshalo eziningi ezinenani eliphakeme. Ngaphambi kokushicilela abakutholile, okuhlanganisa ukubukwa kweminyaka engama-20, abacwaningi babanikeza i-Environmental Protection Agency (i-EPA) kanye nezinkampani ezithuthukise futhi zathengisa lezi zimfanelo, kusho uGalen Dively, oyisazi sezinambuzane sase-University of Maryland futhi ohola umcwaningi ku isifundo.
Izilimo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ze-Bt ziveza amaprotheni athile aziwa ngokuthi (Cry protein) enza ukuthi izitshalo zibe nobuthi ezinambuzaneni ezithile - izitshalo zihlinzeka ngempumelelo isibulali zinambuzane zazo - kunciphisa isidingo sokufakwa kwamakhemikhali. Ngo-2015, ngaphezu kwamaphesenti angama-80 wesitshalo sommbila wase-US ephethe okungenani isici esisodwa seBt. Ummbila omningi osutshaliwe wenziwe ngamaprotheni amaningi we-Bt Cry, kepha ucwaningo olusha lukhombisa ukuthi lesi sinambuzane (esibizwa ngokuthi yi-earworm emmbileni kepha i-bollworm kukotini) manje sesikwazi ukusinda ezicini eziningi ezakhiwe ngezakhi zofuzo ezinhlobonhlobo eziyiphiramidi. Olunye ucwaningo lukhombise ukwehluleka okubanzi kwezimpawu okufanele zivikeleke kumbungu wempande yommbila osentshonalanga futhi, okushiya abalimi bebhekene nezinkinga ezinkulu futhi ezingabiza kakhulu njengoba ukumelana nokwakha, ngokusho kwabaphenyi.
"Ngokusetshenziswa kabanzi kwezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo, izinambuzane ezihlosiwe ezakha ukumelana nala maprotheni ziyingozi enkulu ekusimeni kobuchwepheshe be-Bt," kubhala umcwaningi uDilip Venugopal ngamafuphi kokutholwe yiqembu. “Ukwanda komonakalo owenziwe ummbila wezikhwebu kummbila wensimu ye-Bt sekuvele kubikwa eNyakatho Carolina naseGeorgia, kanti ummbila wezindlebe zommbila ungaba yisilokazane esikhulu. Sibikezela ukuthi ukumelana nezikelemu zommbila kubuthi beCry kungenzeka kwandise, futhi kusabalale. Ngakho-ke, ingozi yokulimala komkhiqizo wommbila engxenyeni enkulu yase-US iphezulu. ” IVenugopal iyi- isayensi nobuchwepheshe esikanye nabo ukusebenza ngokuhlukaniswa kwe-EPA.
Ucwaningo lunezela ebufakazini bokuthi ngemuva kweminyaka engama-20 kusetshenziswa izitshalo ezenzelwe ukubekezelela ukubulala ukhula nokumelana nezinambuzane ezithile eziyingozi, bobabili lobu buchwepheshe buyehluleka ukusebenza. Izinhlobo ezimbili ezisetshenziswa kakhulu zezici ze-GMO yi-glyphosate-tolerance, eyenziwe ngosoya, ummbila, ukotini, i-canola nezinye izilimo; kanye nenkambiso emelana nezinambuzane ze-Bt. Kepha okungenani amahektha ayizigidi ezingama-70 epulazini lase-US seligcwele ukhula olungazweli ku-glyphosate selokhu kwethulwe izitshalo ze-GMO. Futhi, izimpawu zokuqina kokumelana nezinambuzane kubuchwepheshe be-Bt bezilokhu ziphakamisa ukukhathazeka kulo lonke ibhande lepulazi eminyakeni embalwa edlule. Ngehlobo eledlule, ososayensi bashicilele ucwaningo olubhala ngokwanda kokumelana nezikelemu zommbila wasentshonalanga kuma-protein e-Bt, kwathi ukulimala kommbila okusabalele kwabikwa ngabalimi. Abalimi basebenzisa imithi yokubulala ukhula eyengeziwe ukuzama ukulawula ukhula olungazweli, nokubuyela ekusetshenzisweni kwezibulala-zinambuzane ukulwa nezinambuzane ezingazweli, kusho ochwepheshe bezolimo.
UFred Gould, isazi sezinambuzane e-North Carolina State University, uthe umsebenzi we-Dively "isifundo esibaluleke kakhulu," esingakhombisi kahle impilo yezitshalo ezizayo. U-William Hutchinson oyi-University of Minnesota Extension Entomologist uthe lolu cwaningo lukhombisa isidingo sokuqapha kangcono ukumelana nezici ezisasebenza namanje. Njengoba ucwaningo lukhombisile, kusesebenza kahle kakhulu ngezinhlobo eziqukethe zombili i-Vip3A + Cry1Ab, waveza.
Okunye okungahambi kahle kube ukuthembela ohlelweni "lokuphephela esikhwameni" (RIB) esivumele abalimi ukuthi bagweme ukubeka eceleni ingxenye yamasimu abo njengezindawo ezingenabuntu be-Bt, umkhuba oboniswe ukuthi awukhuthazi ukumelana. Ngohlelo lwe-RIB, noma kunjalo, abacwaningi bathole ukuthi abalimi empeleni bakhuthaza ukumelana nokusabalalisa imithamo ephansi engalingani yobuthi be-Bt ukondla izinambuzane emasimini abo, okusize ukwakha ukumelana nezinambuzane ngokuhamba kwesikhathi. Izinkampani ezisekela imikhuba yeBt zikhuthaze ukukhoseliswa esikhwameni. Imbewu enkulu iMonsanto Co, okuyiyona wenza ama- $ 5.8 billion Ekuthengisweni kwembewu yommbila nezici ngonyaka owedlule, ubike ukuthi isikhwama esikhwameni sishesha futhi silungele abalimi, ebavumela ukuthi batshale imbewu ekhethekile “Irowu yocingo kuya kolayini wocingo."
Ama-EPA abhekene necala elikhulu ngale nkinga, ngokusho kwehhovisi le-Inspector General (OIG) le-ejensi, wagxeka le nhlangano ngonyaka odlule ngokusingathwa kwezinkinga zokumelana. Phakathi kwezinye iziphambeko, le nhlangano ibithembele kakhulu embonini yezimbewu namakhemikhali ukuthi ingazibika yona ngezinkinga zokumelana, futhi ayizange inikeze abalimi noma abacwaningi izindlela eziqondile zokubika izehlakalo zokumelana nabalawuli, ngokusho kwe-OIG.
I-EPA nayo iyimfihlo kakhulu nemininingwane eyitholayo ezinkampanini zembewu, igcina imibiko yokuthobela nokuqapha imininingwane evela emphakathini. "Ukubonisa ngale kuyigugu le-EPA," kubhala i-OIG. "I-EPA inayo yonke imininingwane nezindlela zokuthuthukisa ukusebenza obala maqondana nokulawulwa kwayo kwezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ezifana nommbila weBt."
Ukuthembela embonini ukuthi izibike ngokwakho kuyinkinga ethile ngoba kunobufakazi imboni ebekhetha ukungakwenzi lokho. Icala lase-Iowa lokumelana nezinambuzane elatholakala ngo-2009 alizange libikwe njengoba bekufanele ngabe, ngokwesibonelo, kusho i-OIG. I-EPA ibisebenza ukulungisa amaphutha abekwe yi-OIG maphakathi no-2017.
I-EPA ithe “ihlaziya lolu cwaningo neminye imininingwane ephathelene nokumelana nezikelemu zommbila futhi izobheka ukuthi ngabe ukuthuthuka kwezindlela zamanje zokulawulwa kokumelana nezimbungulu kuyadingeka yini.” I-EPA ithe njengengxenye yalolo hlelo, izobamba umhlangano womphakathi nesigungu sabeluleki besayensi ngasekupheleni konyaka.
Kepha kungahle kube sekwephuze kakhulu. Imikhuba yezolimo ehlolwe isikhathi eside njengokushintshaniswa kwezitshalo nokuxubana kwamanye amasu kubalulekile ekulweni nezinkinga zokumelana. Ukuthembela ohlotsheni olulodwa lobuchwepheshe bezakhi zofuzo isizini nesizini nakanjani kuzokwehluleka ekugcineni, ngokusho kochwepheshe bezolimo.
“Akukho abangakwenza ngakho,” kusho uDively. “Kunobufakazi obuqand 'ikhanda ukuthi kuzokonakala,” kusho uDively.
I-GMO Bt, EPA, GMO, ukumelana nezinambuzane, Monsanto, ubuchwepheshe buyehluleka